Porn နှင့် Brain အပေါ်တရားမ ၀ င်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားချိုးဖောက်မှုအတွက် Nicole R Prause & Liberos LLC သို့ Nicole R Prause & Liberos LLC သို့ပေးစာကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်ရပ်ဆိုင်းခြင်း။
Porn နှင့် www.yourbrainonporn.com တွင်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုတရားမ ၀ င်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုအတွက် Nicole R Prause & Liberos LLC သို့ Nicole R Prause & Liberos LLC သို့ပေးစာကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါ။
မေလ 1, 2019 အမှတ်တံဆိပ် "မှေးဖှားတွင်သင့်ဦးနှောက်" ၏ဘုံယောက်ပိုင်ရှင်များအတွက်ရှေ့နေများနှင့် "တွင်YourBrainOnPorn.com"(ဤဆိုဒ်) ဒါခေါ် (အချိုးဖောက်မှု site ကိုနောက်ကွယ်မှဖြစ်ထငျရှားသူမြား၏လူအပေါင်းတို့အားတစ်ဦးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ရပ်တန့်စာတစ်စောင်ကိုစေလွှတ် "ကျွမ်းကျင်သူများက").
တစ်ဦးကစက္ကန့်စာတစ်စောင်ကိုလည်းကြောင်းတောင်းဆိုနေပြီ ဒေါက်တာနီကိုးလ် Prause သူမ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်-squatting စွန့်ခွာ လြှောကျလှာ “ Brain On Porn” နှင့်“ YourBrainOnPorn.com” အမှတ်အသားများအတွက်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်အဆန်းများစွာရှိသည်။
အပ်ဒိတ်: ဥပဒေရေးရာလုပ်ရပ်များကြောင်းထင်ရှား ဒံယလေသ Burgess ၏လက်ရှိပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါသည် realyourbrainonporn.com URL ကို. 2018 ၏မတ်လမှာတော့ ဒံယလေသ Burgess မျိုးစုံလူမှုရေးပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ဂယ်ရီ Wilson နဲ့ YBOP ၏ပစ်မှတ်ထားနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ, ဘယ်နေရာမှာထဲကထင်ရှား။ , Burgess ရဲ့သရေဖျက်မှုတောင်းဆိုမှုများပြီးစိတ်ပျက် rantings အချို့သည်မှတ်တမ်းတင်ဒီမှာ debunked နေကြသည်: ဒံယလေသ Burgess (မတ်လ, 2018) ကပံ့ပိုးမတောင်းဆိုချက်များနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတိုက်ခိုက်မှုများ addressing (Unsurprisingly, Burgess တစ်ဦးအနီးကပ်မဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ် နီကိုးလ် Prause).
Update ကို (နွေရာသီ, 2019): မေလ 8, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်, MD တစ်ဦးအသရေဖျက်မှုတင်သွင်း se နှုန်း ရုံးတင်စစ်ဆေးမှု နီကိုးလ် Prause & Liberos LLC ဆန့်ကျင်။ ဇူလိုင်လ 24, 2019 တွင် Donald ဟီလ်တန်ကသူ့အသရေဖျက်မှုတိုင်ကြားချက်ပြင်ဆင် (အလားတူနှောင့်ယှက်၏ 1 သည်အခြား Prause သားကောင်များအနေဖြင့် (2) ဆေးစစ်တိုင်ကြားချက်တစ်ခုအန္တရာယ်ရှိတဲ့တက္ကဆက်ပြည်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့, (3) မှားယွင်းသောဒေါက်တာဟီလ်တန်သည်သူ၏အထောက်အထားများလိမ်ခဲ့ကွောငျးစွပ်စွဲချက်များနှင့် (9) ကျမ်းကျိန်လွှာကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်ယောဟနျသ Adler, MD, ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, Stacy အညွှန့်, LICSW, Linda Hatch, Ph.D, Bradley အစိမ်းရောင်, Ph.D, Stefanie Carnes, Ph.D, Geoff Goodman, Ph.D, Laila Haddad.)
Update ကို (အောက်တိုဘာ၊ 2019): အောက်တိုဘာလ 23, 2019 Alexander Rhodes (တည်ထောင်သူ reddit / nofap နှင့် NoFap.com) သည်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည် နီကိုးလ် R ကိုချီးမွမ်း နှင့် Liberos LLC။ ယင်းကိုကြည့်ပါ ဒီမှာတရားရုံးစာရင်း။ Rhodes မှတင်သွင်းသောမူလတန်းတရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်ဤစာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ NoFap တည်ထောင်သူ Alexander Rhodes Nicole Prause / Liberos အားတရားစွဲဆိုမှု (ကြည့်ရှု ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးစာမျက်နှာ).
Update ကို (နိုဝင်ဘာ၊ 2019): နောက်ဆုံးတွင်အမှတ်စဉ်မှားယွင်းသောစွပ်စွဲသူ၊ အသရေဖျက်မှု၊ “ NoFap မှ Porn စွဲမှုပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့မှအဲလက်စ်ရော့ဒ်သည်ညစ်ညမ်းသောလိင်စိတ်ပညာရှင်အားတရားစွဲဆိုလိုက်သည်” ၏ Megan Fox ကဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် PJ မီဒီယာ နှင့် “ နို ၀ င်ဘာလတွင်ဖြစ်ပွားသောစစ်ပွဲများသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖြစ်လာသည်”၏ဒိုင်ယာနာ Davison ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် The Post Millennial။ Davison သည် Prause ၏မတူကွဲပြားသောအပြုအမူများနှင့်ပတ်သက်သည့်ဤ6မိနစ်ဗီဒီယိုကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Porn သည်စွဲစွဲလမ်းမှုလော။.
နောက်ဆုံးသတင်းကိုရယူရန် (ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀) အဲလက်စ်ရိုဒ်စ်တင်သွင်းခဲ့သည် Prause ဆန့်ကျင်ပြင်ဆင်ချက်တိုင်ကြားချက် RealYBOP ရဲ့ twitter အကောင့်ကိုလည်းအမည်ပေးထားတယ်။@BrainOnPorn) အသရေဖျက်မှုအတွက်ပါဝငျအဖြစ်။ RealYBOP ၏လိမ်လည်မှု၊ နှောင့်ယှက်စော်ကားမှု၊ The @BrainOnPorn twitter ကိုအသရေဖျက်မှုနှစ်ခုဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသည်။
နောက်ဆုံးသတင်းများ (မတ်လ ၂၃၊ ၂၀၀၀) အဲလက်စ်ရော့ဒ်သည် Prause's ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည် ပယ်ချဖို့ရွေ့လျားမှု။ သူ၏တရားရုံးတွင်အသစ်သောအဖြစ်အပျက်များနှင့်သက်သေအထောက်အထားများ၊ ထပ်မံချီးကျူးထောပနာခံရသူများ၊ ပိုမိုနောက်ခံ / နောက်ခံများပါ ၀ င်သည်။ အတိုချုပ် - ၂၆ မျက်နှာ, ကြေငြာချက် - ၆၄ မျက်နှာ, ပြပွဲ - စာမျက်နှာ 57.
Update ကို (၂၀၂၀၊ သြဂုတ်လ) - Serial အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်သူ Nicole Pause သည် Gary Wilson အားတရားစွဲဆိုမှုများရှုံးသည်။ တရားရုံး၏စီရင်ချက်များကပြစ်မှုကျူးလွန်သူအားချီးမွမ်းခံရသည်။ 2020 ၏သြဂုတ်လ၌ တရားရုံး၏စီရင်ချက်များသည်နီကိုးလ်ပရာ့စ်အားပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်မဟုတ်ဘဲပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မတ်လတွင်၊ Prause သည်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်သူမ၏ပုံမှန်လိမ်လည်မှုများ (ငါ့ကိုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲသည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်း) ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်ကိုဆန့်ကျင်ရန်အကြောင်းမဲ့ယာယီတားဆီးမိန့်ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ တားမြစ်ထားသည့်အမိန့်တောင်းခံရန် Prause ၏တောင်းဆိုချက်အရသူမကသူမကို YBOP နှင့် Twitter တွင်တင်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။မုသားသက်သေခံမှုသည် Prause တွင်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ) ။ တရားမ ၀ င်စနစ် (TRO) ကိုတလွဲအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ငါ့ကိုနှုတ်ဆိတ်။ နှောင့်ယှက်ရန် Prause ကို SLAPP ဆန့်ကျင်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိပြည်နယ်ကောင်တီအထက်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်ကိုတားမြစ်သည့်အမိန့်ရယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် (အများပြည်သူပါဝင်မှုကိုဆန့်ကျင်။ မဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှု) (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။။ Prause သည်သူမ၏လိမ်လည်လှသော TRO တစ်လျှောက်လိမ်ညာခဲ့သည် သုညအတည်ပြုသက်သေအထောက်အထား သူမကိုထောက်ပံ့ရန် ထူးဆန်းတဲ့တောင်းဆိုမှုများ ငါသူမ၏အညှာသို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်ကြောင်း အဂတိတရားအားဖြင့်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်အားတိတ်ဆိတ်စွာနှိပ်စက်ရန်နှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိခြင်းကိုတားဆီးရန်တားမြစ်သည့်အမိန့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ဥပဒေအရ SLAPP ၏စီရင်ချက်သည် Prause အားကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေကြေးပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
နောက်ဆုံးသတင်းများ (စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၂၀) Aaron Minc, JD သည် Nicole Prause အားတရားစွဲဆိုမှုအားကြေငြာခဲ့သည်။
Update (၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ) - Gary Wilson သည် RealYBOP URL ကိုယခုပိုင်ဆိုင်သည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြည့်ပါ - သတိပြုရန်: YBOP သည် www.RealYourBrainOnPorn.com ကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုဖြေရှင်းခြင်းတွင်ရရှိသည်.
၂၀၁၆ မေလ ၁ ရက်၊ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ နီကိုးလ်အားဖြည့်စွက်ရန်အက္ခရာ၏ PDF ကိုပိတ်ပါ
စာမျက်နှာ ၈ မျက်နှာပါသော screenshots များသည်အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီးစာကိုရပ်ဆိုင်းမည်။